Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Vaksina COVID ho an'ny ankizy maika hoy ny dokotera ER
Rehefa lasa misy ny vaksiny COVID-19 ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 11 taona, ny American College of Emergency Physicians (ACEP) dia manentana ny mpikarakara sy ny fianakaviana mba hanao vaksiny ary handray ny fepetra ilaina hiarovana ny ankizy mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra sy ny gripa ho avy.
"Ny mpitsabo vonjy maika manerana ny firenena dia manohy mahita ny loza mety hitranga amin'ny otrikaretina COVID-19 amin'ny marary amin'ny sokajin-taona rehetra, indrindra ho an'ireo tsy voan'ny vaksiny," hoy i Gillian Schmitz, MD, FACEP, filohan'ny ACEP. “Soa ihany fa azo antoka sy mahomby ny vaksiny ary efa misy izy ireo ankehitriny. Ny fanaovana vaksiny ny zanakao dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hiarovana ny fianakavianao sy hanampiana anay handresy ilay viriosy. ”
Ny ankizy dia mora voan'ny aretina mafy avy amin'ny COVID-19 noho ny olon-dehibe, saingy mbola lehibe ny loza ateraky ny COVID. Ankizy 1.9 tapitrisa eo ho eo 5 ka hatramin'ny 11 taona no voamarina fa voan'ny COVID-19, hoy ny Centers for Control and Prevention (CDC). Manodidina ny 8,300 eo ho eo ny hopitaly miaraka amin'ny fahatelo mila fikarakarana fatratra ary farafahakeliny 94 no maty tamin'io sokajin-taona io. Ny CDC dia manoro hevitra fa ny olona rehetra 5 taona no ho miakatra dia mahazo vaksiny COVID-19.
Ny mpitsabo vonjy taitra dia te hanome toky ny mpikarakara fa ny vaksiny misy dia azo antoka sy mandaitra. Tsy maika ny fivoaran'ny vaksiny, ary manaraka dingana henjana ireo vokatra ireo mba hahafeno ny fepetra fiarovana rehetra momba ny sakafo sy ny fanafody (FDA). Tahaka ny vaksiny ho an'ny olon-dehibe, vitsy dia vitsy ny olona voan'ny voka-dratsiny. Ny voka-dratsiny mahazatra indrindra voarakitra mandritra ny fomba fiasa fiarovana dia malefaka sy azo fehezina ao an-trano, anisan'izany ny sandry marary, ny mena eo akaikin'ny toerana misy ny tsindrona, na ny harerahana.
Ny tsirairay dia afaka manao dingana hiarovana ny tsirairay amin'ny fanaovana vaksiny sy ny fanarahana ny torolàlana eo an-toerana, ny fanalavirana ny fiaraha-monina ary ny fisaronana ny tavany. Ny CDC dia manoro hevitra fa ny mpikarakara dia manara-maso ny fifandraisana akaiky amin'ny ankizy iray amin'ny hafa ary mandray fepetra hiarovana ny zaza raha misy marary ao an-tokantrano na misy soritr'aretin'ny COVID-19. Anisan’izany ny fitazonana zaza ao an-trano sy ny fitadiavana fikarakarana sahaza azy raha marary ny zaza iray. Na ny ankizy na ny olon-dehibe dia afaka manaparitaka ny otrikaretina na dia tsy misy soritr'aretina aza.
Ho fiarovana fanampiny mandritra ny vanim-potoanan'ny gripa mampidi-doza, ny mpitsabo vonjy maika dia mamporisika ny mpikarakara sy ny ankizy hanao vaksiny miady amin'ny COVID-19 sy ny gripa. Azo antoka ny manao fitifirana gripa sy vakisiny COVID amin'ny fotoana iray, ary mbola tsy tara ny fanaovana fitifirana gripa ara-potoana amin'ny fiandohan'ny andro mangatsiaka kokoa sy ny fotoam-pialan-tsasatra.
Rehefa manara-maso ny ankizy amin'ny soritr'aretin'ny COVID-19 ny mpikarakara, toy ny tazo mahery, ny aretin'ny tenda, ny kohaka, ny kibo, na ny aretin'andoha, dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fotoana handehanana any amin'ny sampana vonjy taitra, na ho an'ny COVID-19 na hafa. aretina na ratra.
“Misy famantarana ny hamehana izay tsy tokony hodian-tsy hita mihitsy”, hoy ny Dr. Schmitz. "Ny mpitsabo vonjy taitra dia voaofana hiatrika ireo karazana tahotra ara-pahasalamana rehetra, ary ny tsirairay dia afaka mahazo antoka fa ny sampana vonjy taitra no toerana azo antoka indrindra, ho an'ny marary na firy taona na firy taona, rehefa misy fitsaboana maika."